म काठमाडौं जान्छु,विद्यार्थीहरु कुटिएको हेर्न सक्दिँन : डा. केसी | Alagdhar
घरBanner Newsम काठमाडौं जान्छु,विद्यार्थीहरु कुटिएको हेर्न सक्दिँन : डा. केसी
म काठमाडौं जान्छु,विद्यार्थीहरु कुटिएको हेर्न सक्दिँन : डा. केसी
जुम्ला । चिकित्साक्षेत्रको विकृतिविरुद्ध लामो समयदेखि संघर्षरत चिकित्सक गोविन्द केसी काठमाडौं आउन सहमत भएका छन् । प्रहरीले आफ्ना समर्थकमाथि बलप्रयोग गरेपछि डा. केसी आफैं काठमाडौं आउन तयार भएका हुन् । ‘विद्यार्थीहरु कुटिएको हेर्न सक्दिँन, म काठमाडौं जान्छु भन्नु भएको छ’ अनसनरत डा. केसीसँगै रहेका डा. विषद दहालले भने । केहीबेरमा उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिनेछ ।
जुम्लामा आमरण अनसन बसिरहेका प्रा डा. गोविन्द केसीलाई सरकारको निर्देशनमा काठमाडौं पठाउन पुगेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीको टोली अस्पतालबाट केसीलाई नभेटी फर्किएका छन् ।उनीहरु अस्पताल भित्र प्रवेश गरेपनि डा.केसीलाई भने भेट्न पाएनन् । केसीको पक्षमा नाराबाजी गर्दै विद्यार्थीले बाटो छेकेपछि त्यहाँकै भीसीसँग केही बेर कुराकानी गरेर उनीहरु फर्किएका थिए ।
विद्यार्थीले बाटो छेकेपछि अस्पताल परिसरमा प्रहरीले अन्धाधुन्द लाठी चार्ज गरेको जनाईएको छ । प्रहरीको लाठी चार्जबाट एक दर्जन बढी विद्यार्थी तथा चिकित्सकहरु पनि घाइते भएका छन्। बल प्रयोग गरेर भएपनि उपचारका लागि काठमाडौं पठाउन सरकारले निर्देशन दिएपछि त्यसको समन्वय गर्न कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर र शाही र कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी कार्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगेका थिए । आफ्ना समर्थक कुटिएपछि डा. केसी आफैं काठमाडौं आउन तयार भएका हुन् ।
अघिल्लो लेखमापाँच खेलको एकदिवसीय सिरिज पाकिस्तानको पक्षमा
अर्को लेखमाउनले पर्खाल नाघेर भागेपछि…………………..